Mpanampy an-trano - manampy ny mampiavaka Component - SmartMe
Home Assistant, Tutorials
Manampy fika mahazatra ao amin'ny mpanampy an-trano
singa mahazatra, singa mahazatra, ha, mpanampy trano, fampidirana, sonoff
Ao amin'ny lahatsoratra dia hanolorako ny fomba fametrahana ny fampidirana tsy ofisialy (Custom Component) amin'ny Mpanampy an-trano eo amin'ny ohatra fampidirana amin'ny alàlan'ny serivisy rahona eWeLink, ary vokatr'izany dia avelantsika hifehy ireo fitaovana Sonoff nefa tsy manova ny firmware.
Nasehonay vao haingana ny fomba fampiasana ny IKEA Tradfri Integration natsangana. Androany hanehoanay anao ny fomba fametrahana Fampidinana tsy ofisialy.
Home Assistant, IKEA Home Smart, Tutorials
Mpanampy an-trano - fampidirana amin'ny rafitra IKEA Tradfri
ha, mpanampy trano, ikea, fampidirana, tradfri, jiro
Ireo fitaovana IKEA Tradfri dia azo fehezina miaraka amin'ny Home Assistant. Mila fampidirana antsoina hoe "Tradfri" isika. Etsy ambany, amin'ny ohatry ny takamoa IKEA Tradfri, hasehoko anao ny fomba fampiasana an'io fampidirana io.Fanapahana fanandramana: Mpanampy ao an-trano 0.102.3, rafitra ...
Home Assistant dia manana fampidirana ofisialy marobe izay miaraka aminy, vonona hampiasaina. Tsy mila fametrahana fanampiny sy fanavaozana fanampiny izy ireo - havaozina miaraka amin'ny rafitra. Ny lisitry ny fampidirina ofisialy rehetra misy ankehitriny dia hita ao amin'ny:
Na dia eo aza ny fanangonana be dia be (fanitarana 1540 amin'izao fotoana izao), noho ny haingam-pandrosoana amin'ny tontolon'ny IoT, ilaina ny manangana fampidirana bebe kokoa ao anatin'ny mpanampy an-tokantrano, tsy ny hanohana ireo fitaovana taty aoriana ihany, fa mifandraika amin'ny fampiasana serivisy amin'ny Internet, algorithm, automation, sns. fampidirana vaovao, tsy ofisialy, nosoratan'ny vondron-tanana Mpanampy trano. Antsoina izy ireo Amponga mahazatra. Matetika ny repositoriany sy ny torolàlana dia ao amin'ny vavahadin'ny GitHub.
Ny fampidirana tsy ofisialy dia napetraka ao amin'ny lahatahiry:
\_\_ an-toerana \_ config \_ custom_components
izay an-toerana, no talen'ny tokantrano mpanampy an-trano. Tokony hitandrina ny fanavaozana Custom Component isika.
Ity ambany ity dia hasehoko ny fizarana fampidirana tsy ofisialy amin'ny Mpanampy an-trano eo amin'ny ohatra fampidirana amin'ny fampiasana serivisy rahona eWeLink, ary vokatr'izany dia mamela antsika hifehy ireo fitaovana Sonoff nefa tsy manova ny firmware. Nanampy switch Sonoff T4EU1C (tsy misy tariby Neutral) amin'ny fampiharana eWeLink.
Mpanampy an-trano 0.103.6,
Rafitra satroka (Raspberry Pi 2 B),
Samba mizara 9.0 na Configurator 4.2
Miankina amin'ny Custom Component manokana, ho antsika dia ho iray amin'ny Sonoff switch (TX T4EU1C modely) nampidirina tamin'ny fampiharana eWeLink tany am-boalohany.
Ilaina ny fahalalana fototra momba ny mpanampy an-trano.
Azo jerena eto ny pejy fampidirana ampiasainay:
Izahay dia haka ireo rakitra ilaina avy aminy ary hahita torolàlana fametrahana, ary koa ny lisitr'ireo fitaovana Sonoff izay tohanan'izy ireo.
Satria fampidirana miaraka amin'ny serivisy eWeLink, mba hampisy dikany izany dia tsy maintsy mamorona kaonty aloha amin'ny fampiharana eWeLink ianao ary ampio fitaovana iray ao.
1. Sintomy ny singa manokana "HASS-sonoff-ewelink"
Mankany amin'ny tranokala izahay:
ary alaivo ny rakitra .zip miaraka amin'ireo rakitra ilaina. Avy eo hamafa ny tahiry ho lasa kapila.
2. Mandika rakitra
Izahay dia manome antoka fa nametraka sy nanamboatra ny fanampiny miditra Samba mizara.
Izahay dia miditra ao amin'ilay adiresy manaraka:
HASSIO no anaran 'ny tranokala mpanampy ao an-trano izay napetrakay tao anatin'ny fanamafisana Samba mizara (default is HASSIO). Izahay dia mamorona folder vaovao misy anarany custom_componentsary ao anatiny indray - sonoff.
Amin'ity folder ity:
adikao ireo rakitra ao amin'ny archive "HASS-sonoff-ewelink-master.zip" tsy voavaha teo aloha.
3. Tsy voatery - Manamarina ny adiresy IP eo an-toerana an'ny fitaovana
Sonon's Custom Component dia miasa amin'ny fitsipiky ny fampiasana serivisy Internet nomen'ny rahona. Amin'ity tranga ity dia tsy ilaina io hevitra io.
Mitranga anefa na izany aza ny fampidirana (ofisialy na tsia) dia mifandray mivantana amin'ny alàlan'ny WiFi miaraka amin'ilay fitaovana ao amin'ny tambajotranay. Noho izany dia takiana ny hahafantatra ny adiresy IP an'ity fitaovana ity ary asaina ny hametraka an'ity adiresy ity maharitra ao amin'ny lalanay. Amin'ity tranga ity dia vakio ity.
Izahay dia manamarika ny adiresy IP eo an-toerana eo amin'ny router ny fitaovana voafantina tohanan'ny Home Assistant. Ny tranokalan'ny mpampizara lalana dia matetika ahitana ny:
Afaka mahita matetika ny tsipika fitaovana ho an'ny anarana ianao.
Ao amin'ny router "UP Box" Connect an'ny UPC dia angataho aloha ny laharam-pitaterana hampidina ny protokol IPv4 fa tsy ny IPv6 default. Raha tsy misy izany dia tsy ho hitanao ao amin'ny menio ny router ny entana mety.
4. fanovana fanovana.yaml
Matetika indrindra amin'ny tranokala GitHub miaraka amin'ny fampidirana voafantina dia misy torolàlana izay mamaritra ny mpanoratra amin'ny antsipirihany ny fizarana tokony hampidirina ao amin'ny rakitra fanamafisana. Ity fizarana ity dia tokony hampiana mba hananganana fampidirana taloha.
rakitra config.yaml azo ovaina, miaraka amin'ny hafa mampiasa fanampiny Samba mizara ary Configurator. W Samba mizara manana rakitra mivantana izahay, raha ao Configurator, ny fanovana dia amboarina amin'ny fomba ankolaka amin'ny alàlan'ny fampandraisana anjara an-tanana Home Assistant. Matetika aho no mampiasa an'io Configurator.
Safidy 1 - fizarana Samba
Aorian'ny fametrahana ny plugin, ny rakitra "config.yaml" dia tokony ho ao anaty folder:
Safidy 2 - Configurator
Aorian'ny fametrahana ny add-on, ao amin'ny fikirakira azy dia ampy ny misafidy ny "Asehoy amin'ny sidebar" mba hidiranao mora aminy avy amin'ny menio Home Assistant. Ankoatr'izay, mifantina ny rakitra fanamafisam-peo, hanova izany mifanaraka amin'ny baiko sisa, ary hitahiry.
Raha hanetsika ny fampidirana Sonoff, ampio ity fizarana manaraka ity amin'ny rakitra fanamafisana:
sonoff: mpisera anarana: [Username avy amin'ny fampiharana eWeLink] tenimiafina: [Teny miafina avy amin'ny fampiharana eWeLink] scan_interval: 60 grace_period: 600 api_region: 'eu' entity_prefix: Tena debug: diso
Tsy ny andalana rehetra ao amin'ilay fizarana, ny antsipiriany amin'ny antsipiriany azo jerena ao amin'ny pejy iraisana. Ankehitriny tehirizo ny rakitra ary avereno ny mpanampy an-trano anao.
5. Ny fijerena ireo fitaovana Sonoff fanampiny
Aorian'ny famerenanao ny mpanampy trano, ny fitaovana Sonoff mifanentana dia tokony ho hita ao amin'ny Entity:
Fitaovana fampivoarana -> Etazonia
Ireo fitaovana ampiana ao amin'ity fampidirana Home Assistant ity dia hanana "sonoff_" amin'ny voalohany amin'ny alàlan'ny default (raha tsy hoe voafaritra mazava ao amin'ny config.yaml). Noho izany, raha te hijery mialoha azy ireo ianao dia ampy izany eny an-tsaha fikambanana manomboka manorata "sonoff".
6. Manampy karatra ao amin'ny mpanampy an-trano
Ao amin'ny menio lehibe "Overview", amin'ny fampiasana ny magicien namboarina na amin'ny fanitsiana tanana ny rakitra, azontsika atao ny manampy ny karatra switch switch Sonoff.
Mba hahazoana ilay karatra araka ny hita eo amin'ny sary, ao anaty fisie eo ambanin'ny fizarana "zahao:", ampio ny fizarana:
views: - Lohateny: Lonana fanaovana Salon: lalana marina: karona_view karatra: - karazana: lohateny entin'entana: Mamindra show_header_toggle: fitambaran-diso: - entity: switch.sonoff_1000a68535 kisary: ​​mdi: anarana-jiro-jiro: 'Miova'
Ho mpifaninana amin'i Rasberry Pi ve ny mpanampy an-trano?
18 Desambra 2020
Hardware, mpanampy trano, mpanampy an-trano manga, vaovao, rindrambaiko
Ho an'ny ankamaroan'ny mpankafy Smart Home, ny anarana Home Assistant sy Rasberry Pi dia malaza be. Inona moa no tena Smart Home raha tsy misy "control panel" tena izy (fantatro tsara fa amin'ity ...
Mangatsiaka mafana? Fa maninona no tsara kokoa ny sensor Sonoff noho ny thermometer mahazatra?
sensor sensor, sonoff, zigbee
Efa manana ny fanontanianao iray ao an-dohako aho: maninona no mividy "thermometer mahay" raha toa ka mora kokoa ny tsotra? Azonao atao ny mahita ny valin'ity fanontaniana ity amin'ny famerenana etsy ambany. Noho izany, ankafizo ilay lahatsoratra misy ny andraikitra lehibe ...
Boribory ny baolina ary misy tanjona roa? Famerenana ny tanjon'ny Sonoff ZigBee Bridge
Tonga ny fotoana ho an'ny dingana manaraka amin'ny fananganana ny efitrano malalako. Amin'ity indray mitoraka ity dia hifantoka amin'ny tanjona isika. Na izany aza, tsy hanipaka baolina izahay. Ka inona no ilaintsika ny vavahady Sonoff ZigBee? Nofariparitanay ny lalàna momba ny fiasan'ny vavahady amin'ity ...
Vavahady Sonoff Zigbee miaraka amin'ny rindrambaiko Tasmota sy ny fahaizany
18 Aogositra 2020
vavahady, mpanampy trano, sonoff, zigbee
Vao tsy ela akory izay tao amin'ny SmartMe dia afaka namaky lahatsoratra momba ny vavahady sy ny rindrambaiko ananany ("Zigbee - inona izany ary vavahady fidio"), izay nanovozan-kevitra ny lahatsoratro momba ny CC2531 sy ny Zigbee2MQTT. Koa satria ...
Hanova ny Sonclope Sonoff ho an'ny Q-touch ve ny Q-touch? Review
Q-mikasika, sonoff, jiro resaka
Nanomboka tamin'ny ... olana iray amin'ny tsy fisian'ny tariby tsy mitanila amin'ny tranoko. Ekeko marina fa tsy zatra Q-touch aho. Rehefa nitady fantsom-pifandraisana WiFi aho dia nitarika ny vidiny fa tsy ...
Mio Decor Comfort 90 - fampidirina miaraka amin'ny Home Assistant
mpanampy trano, lalamby kofehy, mio haingo, fampiononana mio haingo, Shelly, sosona 2.5, shellyforhass
Ao anatin'ilay lahatsoratra dia hasehoko ny fomba fampidirana ny Mio Decor mMotion Comfort 90 fantsom-bolan'ny herinaratra elektrika miaraka amin'ny mpanampy trano. Hampiasa ny maodely Shelly 2.5 ho amin'ity tanjona ity aho. Ity modul ity dia miankina amin'ny fomba ananantsika ny tariby herinaratra ...
Google Home, Home Assistant, hevitra
Làlan'ny lambam-baravarankely Mio Decor Comfort - famerenana
google home, mpanampy trano, lalamby kofehy, mio haingo, fampiononana mio haingo, Shelly, makina mitambatra, ambainy
Ankehitriny, mihamitombo ny singa maro ao an-tokantranontsika. Ny trano Smart dia manambatra vahaolana izay misy fiantraikany amin'ny filaminana, mitantana ny fanjifana angovo, manome fialamboly multimedia, fa ambonin'izany rehetra izany dia manatsara ny kalitaon'ny fiainana. Fitaovana ...
ShellyForHASS - mora ny manampy an'i Shelly amin'ny mpanampy ao an-trano
singa mahazatra, mpanampy trano, Shelly, sosona 2.5
Androany aho te hampiseho aminao amin'ny endrika torolàlana kely momba ny fomba hanampiana mora foana ny fitaovana Shelly rehetra ho an'ny mpanampy ao an-trano. Hampiasa ny add-on ShellyForHASS izahay ho an'ity tanjona ity. Tombony azo amin'ny fanampiana Add-on ShellyForHASS Ao amin'ny pejy miampy, ny mpanoratra dia manolotra tombony marobe amin'ny ...